Maqaal: Agoontii Lagu Koriyey Xaaraantii Majeerteeniya Ku Bixinaysey magaca Sool oo Dagaalkii Kula hoos noqdey Dhulbahante Dhexdiisa ⋆ Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Maqaal: Agoontii Lagu Koriyey Xaaraantii Majeerteeniya Ku Bixinaysey magaca Sool oo Dagaalkii Kula hoos noqdey Dhulbahante Dhexdiisa
Ilaa iyo intii kooxaha ishuwan ee SNM iyo Huwantoodu ka ceydhsadeen magaalada Tukaraq majeerteen iyo adeegayaashiisii ay ku isticimaali jireen weligeed duleynta shacabka Dhulbahante iyo xaqooda ku boobka ayaa waxey bilaabeen iney websaidyada weligoodba maamuladaas kaga lacag qaata maamulkas isku dirka shacabka dhulbahante dhexdiisa iyo baraha bulshada iney caay iyo aflagaadooyin u geystaan beelaha kasoo jeeda gobolka Sool qaarkoodna dushana uga tuuraan dhibaataduu u geystey isaaqii ka ceydhsadey dhulkey wakiilka uga ahaayeen beesha Maxamuud saleebaan, lacagaha xaqdarada ahna uga aruursanayeen shacabka dhulbahante.
Dadkan iyo websidyadan ayaa ku caanbaxay weligood kala qeybinta iyo ladagaalanka shacabka kunool gobolada SSC iyo wax walbey isyidhaaheen kaga baxa Gumeysiga iyo bahdilka Iidoor iyo Majeerteeniya, si ay sandareerada uga qaataan iyaga iyo caruurtooda oo keliya.
Magaalada tukaraq waxaa kala qabsadey maamulada Isaaq (Somaliland) iyo kan Majeerteen (Puntland) iyo maleeshiyaad Dhulbahante ah oo u kala adeega labadaasi Beelood oo iyagu aan wax talo ah ku lahayn laakiin amarkii lasiiyo uun qaata.
Magaalada Tukaraq wuxuu Isaaq u qabsadey inuu ka xoogo lacagta faraha badan ee Majeerteen isbaarada ugu dhigtey baabuurta u sida maceeshada shacabka gobolada SSC. Majeerteena waa la gartey oo inteyanba soo gaadhinba buu isaga iyo maleeshiyaadkii uu lugaha ku xaadhanayey sii carareen sidoodii, Isaaqna sidiisii waa degey oo saldhig buu ka dhigtey ileen waa dhulaan Ragi laheyne.
Markaa maxaa sababi kara in kiiskaa sidaa u cad lala soo fadhiisto websaidho iyo baraha bulshada oo qabiilo aan carigaba ka dhaweyn maleeshiyaadka qabsadey ee Iidoorka la socdeyna aan cidi kaga jirin cay iyo naceyb abuur loola soo fadhiisto.
Taasi waxey muujineysa dadkii labaatankii sano ee u dambeysey u adeegayey Isaaq iyo Majeerteen ee isaaqna soo wedey min ceynaba ilaa Laaska Majeerteen iyo ina Afguduudna Laaska kusoo hogaamiyey Laaskoo nabada oon isaaqba dan ka lahayn ay sidoodii u caadada ahayd abuurayaan uun nacayb Dhulbahante dhexdiisa ah oo ay iyaga dantooda shakhsiyeed ugu badiso ay weli ku dhaqmayaan.
Maxamed Axmed Cali (Maxamed yare).